Walter Isaacson na-ekwu na Apple abụghị ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ | Esi m mac
Walter Isaacson kwuru na Apple abụghị ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ
Maka ndị niile na-amaghị ya, Walter Isaacson bụ onye nta akụkọ, onye edemede na onye na-ede akụkọ ndụ onye edemede nke naanị akụkọ ndụ Steve Steve nyere ikike. Akwụkwọ a malitere na October 2011 ka dị taa ma anyị nwere ike ịsị na ọ bụ tupu na mgbe ọ gasịrị na ndụ Isaacson, ebe ọ bụ na ya na onye isi nke Apple nọrọ ọtụtụ awa n'oge ụfọdụ oge siri ike ebe Ọrụ kewara n'etiti ndụ na ọnwụ . Nke a nyere ya ohere izute ezi onye isi ala nke Apple ma mee akụkọ ndụ na site na ebe a anyị na-akwado ịgụ mmadụ niile, ma ị bụ onye na-eso Apple na Steve Jobs ma ọ bụ
Mana ịhapụ akwụkwọ mara mma nke Isaacson bipụtara 6 afọ gara aga, na N'ajụjụ ọnụ na-adịbeghị anya na CNBC, nke a kwuru banyere ugbu a nke ụlọ ọrụ nke na-aga n'ihu na-eto eto na ụlọ ọrụ ebe usoro ịgha ụgha nwere ike ịhapụ gị na gọta. N'echiche a, o meela ọkwa ya na ụlọ ọrụ ahụ nke ọma taa, na-ekwupụta nke ahụ Apple abụghịzi ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ.
N’ụzọ ezi uche dị na ya, onye a gbara ajụjụ ọnụ nyere echiche ya banyere steeti Apple ugbu a, na-akọwa nke ahụ Nke a abụghị ụlọ ọrụ na-ele asọmpi ahụ ma ghara ịga nke aka ya.Mana azịza ya nwere ike ịdị na-elekwasị anya n'oge gara aga karịa ugbu a. Anyị kwenyere na Apple na-ebi ntakịrị oge gara aga dịka ụlọ ọrụ niile na-eme yana ịsị na ọ naghị ewepụta ihe ọ bụla na-ekwu ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na anyị echebara ngwaike nke ụdị a ugbu a, mana karịa sọftụwia niile.
O doro anya na anyị enweghị ike ịgọnahụ na Apple nwere ike ime ihe ọ bụla karịa nke ọ na-eme taa, mana ọ nwere ike ọ gaghị achọ ya ugbu a ma ọ bụrụ na anyị echee na a na-ere ngwaahịa ya ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọzọ na nke ụta maka nke ahụ Isaacson na-ezo aka nwere ike ịbụ kpomkwem a. I chere na Apple akwụsịla imepụta ihe?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Walter Isaacson kwuru na Apple abụghị ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ
Gramdị telegram 2.98 dị ugbu a maka nbudata. Oku na-abịa na Mac
iTunes ga adị na Microsoftlọ Ahịa Microsoft, Windows Store